‘सीधा कुरा’मा खाली कुर्सी, रवि लामिछाने पक्राउ, अबको कानुनी प्रक्रिया के? कहिलेसम्म हिरासतमा? – MySansar
लाइभ प्रसारण हुने ‘सीधा कुरा जनतासँग’ सुरु हुनु एक घण्टा २५ मिनेट अगाडि न्युज २४ टिभी कार्यालय परिसरबाट प्रहरीले प्रस्तोता रवि लामिछाने र उनका सहयोगी युवराज कँडेललाई पक्राउ गरेपछि कार्यक्रम अवरुद्ध भएको छ।
कार्यक्रम प्रसारण हुने निश्चित समय पौने ९ बजे टेलिभिजनले खाली कुर्सीसहितको टिभीको सेट देखाएको थियो।
खाली कुर्सी र लोगो म्युजिकसहित रवि लामिछानेको ट्विट र उनी पक्राउ परेको जानकारीसहित छानबिनमा सहयोग गर्ने उनको प्रतिवद्धतालाई टेलिभिजन स्क्रिनको तल देखाइएको थियो।
केही समयअघि मात्र न्युज २४ टिभी छाडेका पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको मृत्यु प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि प्रहरीले रविलाई पक्राउ गरेको हो। हिजोमात्रै शालिकरामले मर्नुअघि रेकर्ड गरेको भनिएको भिडियो सन्देश सार्वजनिक भएको थियो। भिडियोमा आफ्नो मृत्युका लागि रवि लामिछाने, उनका सहयोगी युवराज कँडेल र रुकु भनिने अस्मिता कार्की दोषी रहेको उनले रुँदै बताएका छन्।
चितवन प्रहरीले विज्ञप्ति जारी गर्दै तीन जनालाई पक्राउ गरेको जानकारी दिएको छ-
अबको प्रक्रिया के?
विभिन्न टेलिभिजनहरुलाई अन्तर्वार्ता दिँदै चितवन जिल्ला प्रहरी प्रमुख दानबहादुर मल्लले उनीहरुलाई आजै चितवन ल्याइने जानकारी दिएका छन्।
एभिन्युज टेलिभिजन हेरिरहेको थिएँ अघि। त्यसमा दिइएको जानकारी अनुसार जरुरी पक्राउ पूर्जी जारी गरी उनलाई पक्राउ गरिएको हो।
पक्राउ पूर्जी बुझ्दै रवि लामिछाने। फोटो : न्युज २४
केही अनलाइनहरुमा आएको समाचार अनुसार रविले आजको कार्यक्रममा अस्मिता कार्कीसित लाइभ कुराकानी गर्न खोजेका थिए। कार्यक्रमका प्रोड्युसर दीपक बोहोराले हिजै आफ्नो फेसबुकमा अस्मिताको मेसेजका स्क्रिनसटहरु सार्वजनिक गरेका थिए।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली,२०७५ अनुसार कसैलाई पनि पक्राउ गर्नका लागि पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने अनुमति अदालतबाट लिनुपर्छ। जरुरी पक्राउ पुर्जी भनेको त्योभन्दा अर्जेन्ट अवस्थामा पक्राउ गर्नका लागि अपनाइने प्रक्रिया हो। यसका लागि पनि स्वीकृतिका लागि अदालतमा पेश गर्नुपर्छ। नियमावलीमा भएको व्यवस्था यस्तो छ-
अनुसन्धानका लागि हिरासतमा
पक्राउ पुर्जी जारी भएर नियन्त्रणमा लिएर चितवन लगिसकेपछिको अर्को प्रक्रिया हुन्छ- अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्ने। यसका लागि पनि प्रहरीले उनीहरु तीनै जनालाई अदालतमा लग्नुपर्छ।
यसका लागि नियमावली अनुसार ऐनको दफा १४ बमोजिम अनुसन्धानको लागि अभियुक्तलाई हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएमा अनुसन्धान अधिकृतले अनुसूची -६ बमोजिमको ढाँचामा सरकारी वकिल कार्यालय मार्फत अदालतमा निवेदन दिनु पर्नेछ।
भिडियो हिजो मात्रै मिडियामा सार्वजनिक गराइएको भए पनि आफन्त र प्रहरीले घटना भएको दिनै पाइसकेको थियो। त्यही आधारमा एक चरणको अनुसन्धानसमेत भइसकेको थियो।
अनुसन्धान स्रोतका अनुसार रविको टिमले चलाउने १० वटा मोबाइल नम्बर, रवि आफैले चलाउने तीन वटा नम्बरको प्राविधिक अनुसन्धान भइसकेको छ। ती नम्बरहरुको कल डिटेल, एसएमएसहरु सब अनुसन्धान भइसकेको छ। शालिकरामको मोबाइल र त्यसमा भेटिएको भिडियोको पनि डिजिटल फरेन्सिक ल्याबले अनुसन्धान गरिसकेको छ।
भिडियोमा भनिए अनुसार रवि लामिछानेले शालिकरामलाई टर्चर दिएको हो कि हैन? शालिकरामसित सम्पर्क भएको छ कि छैन ती सब यो केसमा अनुसन्धान र प्रमाणको आधार बन्ने छ। स्रोतका अनुसार न्युज २४ टिभी छाडिसकेपछि शालिक र रविको सम्पर्क प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको छैन। तर उनले आफै नभएर अरुलाई लगाएर टर्चर दिएको पो हो कि भन्ने कोणबाट अनुसन्धान भइरहेको छ।
कति दिन रवि हिरासतमा?
धेरै कुरा बाहिरी परिस्थितिले पनि निर्धारण गर्नसक्छ नेपाल जस्तो देशमा। रवि लामिछानेका समर्थकहरु आन्दोलनमा उत्रिएर एक किसिमको दबाब सिर्जना गर्न सक्छन्। मिडिया, सोसल मिडियाले जनमत कस्तो बनाउँछन् त्यसमा पनि भर पर्न सक्छ।
अनुसन्धान सकिएपछि प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत् जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्छ। पहिले आत्महत्या हो भने कुनै पनि कारबाही हुँदैन थियो। तर गत वर्ष भदौ १ गतेदेखि लागू भएको कानुनमा आत्महत्यालाई पनि कानुनी दायरामा ल्याइएको छ। आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिने र आत्महत्या गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्थासहितको “मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४” ले गरेको छ।
शालिकरामले मर्नुअघि बनाएको भिडियोमा उनको दावीका आधार खोजेर हो/हैन थप प्रमाण जुटाउने अब प्रहरीको काम हो। उनले आवेशमा भनेका हुन् कि वास्तवमै बाध्य बनाएको हो वा उनलाई त्यस्तो लागेको वास्तवमा त्यसो नभएको- के हो खास कुरा ? उसले गरेको दावी सत्य हो/हैन थप आधार खोज्नेछ प्रहरीले।
यो केसमा आत्महत्याको कारण युवतीको बलात्कारको आरोप र कार्यक्रम प्रसारण धम्की देखिन्छ मृतकको दावी अनुसार। अब यसको पुष्टि आवश्यक हुन्छ। मर्नुअघि कसैले पनि झुटो बोल्दैन भन्ने मानिन्छ। रविको सहयोगीले कुरा गरेको भन्ने देखिएको छ। युवतीले के बयान दिन्छिन्। रविले शालिकरामसित र युवतीसित फोन, मेसेज, सामाजिक सञ्जाल आदिमा कुराकानी गरेको छ कि छैन यसलाई आधार बनाइन्छ।
आत्महत्याको दुरुत्साहनको परिभाषा मात्र हेर्ने हो भने अस्ति भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि सुसाइड गर्ने कर्मचारीको सुसाइड नोटको आधारमा अख्तियार प्रमुख नि तानिनुपर्ने हो। त्यसैले भर्खरै लागू भएको यो कानुनको कार्यान्वयनको प्रक्रिया हेर्न बाँकी छ।
केही अघि मात्र समता अस्पतालको केसमा उत्तम सन्जेलकी पत्नीसहित दुई कर्मचारी मृतकसित भेटिएको चिटको आधारमा दुरुत्साहनको मुद्दा चलेको थियो। अदालतमा प्रारम्भिक सुनुवाईका क्रममा उनीहरुलाई तीन तीन लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाडिएको थियो। मुद्दा जारी छ। फैसला भइसकेको छैन।
रवि लामिछानेको केसमा पनि दुरुत्साहनको मुद्दा अदालतमा पुगेपछि तीन वटा सम्भावना हुनसक्छ- साधारण तारेखमा छाड्ने, धरौटीमा छाड्ने अथवा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने।
यो केसमा अधिकतम सजाय पाँच वर्षसम्मको भएको हुनाले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश पनि हुँदैन भन्न सकिन्न। मुद्दा कस्तो छ? प्रमाणहरु कसरी राखेका छन्? यस्ता कुराले आदेशमा असर गर्छ। प्रमाणित हुन गाह्रो जस्तो देखिए साधारण तारेखमा छाड्न सकिन्छ। दोषी देखिने पर्याप्त आधारहरु भए पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन पनि सक्छन्।
अहिलेको अवस्थामा रवि लामिछाने अनुसन्धानका लागि प्रहरी नियन्त्रणमा हुन्। अदालतले थुनामा राख्न अनुमति दिएपछि न्यायिक हिरासतमा हुनेछन्। दोषी हो कि हैन चाहिँ तपाईँ हामीले हैन अदालतले निर्क्यौल गर्ने हो।
6 thoughts on “‘सीधा कुरा’मा खाली कुर्सी, रवि लामिछाने पक्राउ, अबको कानुनी प्रक्रिया के? कहिलेसम्म हिरासतमा?”
Pingback: युट्युबरको ‘फैसला’ विपरीत अदालतले थप्यो रवि लामिछानेसहित तीन जनालाई पाँच दिनको म्याद, अबको प्रक्रिया यस्तो हुन्छ – Mysansar
Pingback: रवि प्रकरण : ५ दिन म्याद आज सकियो, अब के हुन्छ? यस्तो छ कानुनी प्रक्रिया « Mysansar
Pingback: रविलाई अदालतले पाँच दिन म्याद थप्दै गर्दा बारे कसले के भने? – Mysansar
ज्यानै मारेको व्यक्तिलाई पनि जमानतमा छोडेकै छ/ तर यहा त् आफ्नै कर्तुतको कारणले आत्महत्या गर्ने व्यक्तिले उसको कर्तुत मिडियामा ल्याउन लागेकोले आफुले आत्म हत्या गरेको नोट लेखेकै भरमा यक जना पत्रकारलाई प्रहरीले हिरासतमै लिनु पर्ने कारण को पछाडी कानुन मात्रै भयको पत्याउन सकिंदैन/ प्रहरीले उसलाई बोलायको बेला उपस्थित हुने निर्देशन दिन सक्थ्यो तर थुनि हाले/ आरोप प्रमाणित नभय सम्म कोहि अपराधि हुँदैन; त् थुने किन; माथिको; प्रहरीमा आफ्नो प्रभाव भयको व्यक्तिले “रविलाई थुन” भनेकोले?
रवि ज्यु आफ्नो पेसामा सफल व्यक्ति हुनु हुन्छ; उसको पनि प्रतिष्ठा त् छ नै/ तेतिकै कसैले भनेकै भरमा खोरमा थुने पछि उसको प्रतिष्ठाको हनन हुँदैन? नेपालमा कुनै पनि प्रकारको प्रभावसालि तथा ठुला हौँ भन्ने व्यक्तिहरु स्वेच्छाचारी भयको मूल कारण उनीहरुको कारणले पिडित भयकाले छ्यतिपुर्ति भराउन पाउने कानुन नभयकैले हो/ यहि कारणले डाका ज्यानमारा लुटेरा भन्नु पर्ने प्रेसरकुकरेहरुलाई “नेता” मान्नु परेको हो/ यदि नागरिक लाई बिना अपराध र गल्ति पिडित हुन् बाध्य गर्नेलाई नागरिकले छ्यतिपुर्ति पाउन र पिदकलाई सजाय होस् भनि रित राख्न पाउने कानुन बनेको भय “कुन कुजातले पड्किने प्रेसर कुकर देखाउंदै तराईरहन सक्थे?
रवि ज्युले अहिले प्रमाणित नै नभयको आरोप लगायर ठुनेकोलाई “देसमा नागरिकहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन र तर्साउने देखि डराउनु नपर्ने बनाउनको निमित ससक्त संघर्ष गर्ने अवसर को रुपमा प्रयोग गरुन”/ आसा छ अनन्य पत्रकारहरु र अधिवक्ताहरुले पनि उहालाई साथ् त् दिनेनै छ/
कानुनन होईन माथिको आदेश र निर्देशनको कमाराहरु देखि लाग्ने “घिन” लाई अब कसैले थेग्नै नसक्ने “प्रतिकार” को रुप दिनु पर्छ/ कानुन र अधिकार सम्पन्न नागरिकले नटेरे को राजा को नेता को प्रहरी!!!
Pingback: नेताको नाम लिएर कोही मरे के हुन्छ? प्रतिवेदनमा कानुन दुरुपयोगको सम्भावना र नियन्त्रणका उपाय यस्तो « Mysansar